लुम्बिनी मेडिकल कलेजले गरिवलाई ढाट्योः जागिर दिन्छु भन्यो, तर दाल चामलमा टार्यो – Palpa Samachar
लुम्बिनी मेडिकल कलेजले गरिवलाई ढाट्योः जागिर दिन्छु भन्यो, तर दाल चामलमा टार्यो
By palpa samachar	 On Oct 6, 2019
गत असार २७ गते पाल्पामा एउटा सनसनीपूर्ण समाचार भाइरल नै बन्यो । पाल्पाकै लागि यो घटना नौलो र आश्चर्यको थियो । गल्याङ नगरपालिका ५ की ३६ वर्षीया बिमकला पाण्डेले लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाटै अर्कैले जन्माएको शिशु चोरेर लगिन् । संयोगले शिशु सकुसल भेटिए । शिशु अपहरणकी आरोपित अहिले जिल्ला अदालत पाल्पाको आदेश अनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् ।
घटनाक्रम यस्तो थियो
लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा तानसेन नगरपालिका ९ डाँडाडुमकी २२ वर्षीया जमुना रानाले असार २७ गते बिहान ११.५६ मा शिशु (छोरा) नर्मल रुपमा जन्माएकी थिइन् । सुत्केरी जमुनाको रेखदेख गर्न उनकी आमासँगै थिइन् । सुत्केरी जमुना अर्धचेत अवस्थामा रहेको अवस्थामा उनकी आमा छोरीलाई ज्वानोको झोल ल्याइदिन बच्चा काखमा राखेर मेडिकल कलेजकै क्यान्टिनमा गएकी थिइन् । उनीसँगै बिमलाले पनि बच्चा काखमा लिएर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिन् ।
दिउँसो ३ बजेतिर ज्वानोको झोल जमुनाकी आमालाई लैजानुस् भनेर बिमकलाले बच्चा आफूले ल्याइदिने बताएकी थिइन् । तर, जमुनाकी आमा सुत्केरी छोरीसँग पुग्दासमेत ती महिला बच्चा लिएर नपुगेपछि मात्र खोजी सुरु भएको थियो । जमुनाकी आमा सरासर ज्वानोको झोल लिएर छोरी भएको हस्पिटलको माथिल्लो तलातिर लागिन । बच्चा समातेकी बिमकला बच्चा सँगै लिएर सरासर मुल गेट बाट बाहिरिइन् ।
शिशुलाई अपरहण गरि उनले स्याङजाको मिर्मी पुर्याइन् । बिमकला कालीगण्डकी ए परियोजनामा सरसरफाई कर्मचारीको रुपमा कार्यरत भएकोले उनी कार्यालयकै क्वाटरमै बस्थिन । २७ गते साँझ उनले बच्चालाई लिएर क्वाटरमै पुगिन् । अस्पतालबाट बच्चा हराएको खवर सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले उनको क्वाटरमा बच्चा रोइरहेको र उनी गर्भवती अवस्थामा पनि नरहेकोले उनैले बच्चा अपहरण गरि ल्याएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीलाई खवर गरेका थिए ।
श्रीमान्लाई देखाउन बच्चा जन्माएको नाटक गरेकी थिइन् बिमकलाले
अरोपित बिमकलाले हालै दोस्रो बिहे गरेकी हुन् । उनको पहिलो पतिको मृत्यु भइसक्यो भने पहिलो तिरका १ छोरा र १ छोरी उनकै माइतीमा बसेर पढ्दै आएका छन् । उनले १ वर्ष अघि फेसबुक चिनजानको आधारमा नेपालगञ्जका एक युवासित बिहे गरिन् । ६ महिना सँगै बसेपछि उनका पति हाल रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका छन् ।
पति कतार गएपछि उनले आफ्नो पतिको धेरै माया पाउने आशमा आफू गर्भवति भएको बताइन् । तर उनले पहिले नै परिवार नियोजन गरि सकेकी थिइन् । गत चैतमा सोही लुम्विनी मेडिकल कलेजमा एपेडिक्सको अपरेसन समेत गरेकी थिइन् । उनी नियमित चेक जाच गराउन मेडिकल कलेज आउने गर्थिन् तर उनले गर्भ जचाउने आएको भन्दै विदेशमा रहेका पतिलाई ढाट्ने गर्थिन् ।
उनी असार २३ गते देखि नै मेडिकल कलेजमा बस्दै आएकी थिइन् । मेडिकल कलेजमा बिरामी नभएको अवस्थामा बिरामी बेडमा कुरुवा समेत सुत्न पाउने भएकोले उनले अस्पतालका सुत्केरी वार्डका बेडमा ४ रात पुरै बिताइन् । उनले आफू गर्भवति भएको भनेर पतिलाई ढाटेकै कारण पतिलाई देखाउनकै लागि नवजात शिशु चोरेर लगिन् ।
अस्पतालबाटै बच्चा चोरिनु कसको दोष ?
अस्पतालबाटै त्यो पनि नवजात शिशु चोरी हुनु सामान्य बिषय होइन । यसमा अस्पताल प्रशासन र उक्त वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको चरम लापरवाही थियो । बिनाकारण ५ दिन अस्पतालको बेडमा एकजना महिला बसिरहँदा पनि अस्पतालले बिरामी नै नभएको मान्छे अस्पतालमा यसरी किन बसिरहेका छ भनेर सोधी खोजी गर्न सकेन । बच्चा सकुशल भेटिएकै कारण लुम्विनी मेडिकल कलेजमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यनीकरण भयो । तर अस्पतालले दोषीको पहिचान नै गरेन । हुन त यसअघि पनि यही कलेजमा धेरै यस्ता घटना भएका छन् । निको हुन भन्दै हिडेरै अस्पताल आएकाहरु स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले लास बनेर फर्केका छन् । अस्पतालले तस्तस्का लागि घटना थामथुम पार्न सहमति पनि गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । जसको उदाहरण डाँडाडुमका राना परिवार पनि हुन् ।
त्यतिबेला अस्पतालबाटै शिशु अपरहणमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमा मेडिकल कलेजको तीव्र आलोचना भयो । प्रहरी प्रशासन पनि शिशु खोजेर ल्याउनेमा मात्रै सीमित भयो तर घटना कसरी भयो र दोष कसको भनेर खोजेन । किनकी प्रशासन र कलेजको निकटताले घटनाप्रतिको दोषी खोज्ने प्रक्रिया नै मौन भयो । कलेज बिरामी मैत्री भन्दा पनि सेयर सदस्य मैत्री भएको आरोप छ ।
पिडितसित के सम्झौता गरेको थियो अस्पतालले ?
घटना भएको अर्को दिन असार २८ गते अस्पतालका बिरुद्ध नाराबाजी हुने तयारी थियो अस्पताल परिसरमा । पिडितका आफन्तीहरु र सर्वसाधारणहरु अस्पतालको चरम लापरवाही भएको उल्लेख गर्दै थिए । त्यो बेला अस्पताल चनाखो बन्यो मदनपोखराका जनप्रतिनिधि वडा नं. ९ का अध्यक्ष हरिसुमर रेग्मी लगायतलाई बोलाई दुबै पक्षबीच सम्झौत भयो । सम्झौता नं. १ बच्चाको बुवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने २. नवजात शिशु र सुत्केरी आमालाई निशुल्क उपचार अस्पतालले गरिदिने । सम्झौतापत्रमा वडाध्यक्ष रेग्मी र कलेजका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । एउटा गरिवको छोराप्रति अस्पतालले देखाएको सदासयताप्रति आफन्तीहरु खुशी भए र नाराबाजी रोकियो ।
तर सम्झौता भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि बच्चाको बुवा किसान रानाले अस्पतालमा रोजगारी पाएका छैनन् । सम्झौतापछि अस्पतालले बिर्सियो, सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अर्का वडाध्यक्षले पनि के भयो भनेर फलोअप गरेनन् । किसान ४ पटक अस्पतालमा मलाई जागिर खोई भनेर पुगेपनि अस्पतालले कुनै चासो नदेखाएको दुखेसो पोखे । उनले भने–“त्यतिबेला हामीलाई आस देखाए तर काम दिएनन् ।” आफूले जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए । अस्पतालले त्यतिबेला २ सय किलो चामल, २५ किलो दाल, १ किलो घिउ र केही काजु किसमिस दिएको तर जागिर दिने कुरामा वास्ता नगरेको उनले बताए । शनिवार साँझ आफ्नो छोराको लागि छिमेकीको घरबाट ५ मुठी दुध किनेर ल्याउँदै गरेका रानाले भने–“आमाको दुध पुग्दैन, किनेर धेरै खुवाउन पैसा छैन ।”
कलेजका सुचना अधिकारी कृष्ण पराजुलीले उक्त सम्झौताको समयमा आफू जिल्ला बाहिर रहेको, पिडित ब्यक्ति आफूकहाँ जागिर खोई भन्दै आएको तर उनको क्षमता अनुसारको काम मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म रोकिएको बताए । उनले यसबारे अध्यक्ष सहित नेतृत्वसँग छलफल गरि सम्झौता अनुसारको रोजगारीका लागि पहल गर्ने बताए ।
संस्थागत सुत्केरी वडा अभियानमा पूर्वखोला गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो
वडा स्तरीय भलिबल र मैत्रीपुर्ण फुटवल प्रतियोगिता हुने